काठमाडौं - दुनियाकै सम्पन्नशाली तथा सभ्य भनिने मुलुक अमेरिकामा एउटा अन्त्यन्तै दर्दनाक तथा पासविक घटना भएको छ । त्यहाँ एकजना गर्भवती युवतीको हत्या गरी हत्याराहरुले उनको पेटमा रहेको शिशु चोरेका छन् । उक्त घटनामा संलग्न ३ जनालाई पुलिसले पक्राउ गरेको छ । हत्याराहरुमा एकजना महिला, उनकी छोरी र प्रेमी रहेका.....
सँसारमा अचम्म अचम्मका मानिसहरु भेटिन्छन् । सञ्चार तथा प्रविधिको माध्यमले अचम्मको कला व्यक्ति भएकाहरुको कला अहिले लुकेर बस्न पाउँदैन । विशेष गरी विदेशमा अनेक स्टेण्ड गरेका भिडियोहरू हामी सामाजिक सञ्जालमा देख्न सक्थ्यौ । तर नेपालमा पनि पछिल्लो समय थुप्रै कला भएका व्यक्तिहरुको भिडियो युटुब लगायतका.....
बेलायतको “संसद भवन”मा प्रयोग भएको “कण्डम” भेटिएपछि
बेलायतको संसद भवनमा प्रयोग भएको कण्डम भेटिएपछि हँगामा भएको छ । बेलायती संसदमा प्रयोग गरिएको कण्डम नै फेला परेपछि हंगामा नै मच्चिएको हो । सन्डे टाइम्सले जनाएअनुसार सांसदहरू संसदमा प्रयोग भएको कन्डम बोकेर आउने गरेको खुल्न आएको छ । यो खुलासा उक्त कार्यालयमा सरसफाईको काम गर्ने कामदारहरूले गरेका हुन । उनीहरूका.....
अचम्म ! ज्युँदा सर्पहरुसँगै सुत्ने, खाने गर्छन, पाल्पाका २१ बर्षे सागर पाण्डे ! (भिडियो हेर्नुहोस) काठमाडौं- पाल्पा अर्गलीका सागर पाण्डे सर्प बचाउ अभियानमा लागेका छन् । चार बर्षको अवधिमा उनले तीन सयभन्दा बढी सर्प बचाइ सकेका छन् ।सर्प देखेर नडराउने मानिस कमै हुन्छन् । तर पाल्पा अर्गलीका सागर पाण्डे सर्पलाई.....
पाकिस्तानका हुंजा समुदायका महिलाहरु ८० वर्ष पार भएपनि ३० –४० वर्षका जस्ता देखिन्छन् । यो समुदाय उत्तरी पाकिस्तानको कराकोरम पहाडमा बस्ने गर्दछन् जहाँ मानिसहरुको औसत आयु १२० वर्ष हो । कतिपय अवस्थामा १६५ बर्ष सम्म बाचेको देखिन्छ । यहाँका मानिसका विशेषताः – यस समूदायका मानिसहरु शारिरिक र मानसिक रुपमा बलिया.....
भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलहालाई देखेपछि दुलहीले विवाह गर्न अस्विकार गरिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘म माथि धोका भएको छ । स्रोतका अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले.....
भारतमा भेटियो “२५ करोड बर्ष” पुरानो “रुखको अवशेष”
भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेशको खडापत्थर क्षेत्रमा २५ करोड वर्ष पुरानो रूखको अवशेष भेटिएको छ। अवशेष डाइनोसर युगको भएको दाबी गरिएको छ। हिमाचल राज्य संग्रहालयका क्युरेटर डा। हरि चौहानले अवशेष भेटिएको पुष्टि गरेका छन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ। डा. चौहानका अनुसार अवशेष संरक्षण गर्ने प्रयास.....
लण्डन: गुडिरहेको “रेल”मा एक्कासी अश्लील आवाज बजेपछी
लन्डनमा एउटा विचित्रको घटना भएको छ यात्रुहरु सवार रेल गुडिरहेको थियो । एकाएक रेलको ‘साउन्ड सिस्टममा’ अश्लील फिल्मको आवाज गुन्जियो । रेलमा सवार यात्रुहरु चकित भए । केही हास्न थाले । त्यत्तिकैमा एक यात्रु पल ब्रन्टनले एउटा सानो क्लिप बनाए । र ट्विटरमा सेयर गर्दै लेखे, ‘मेरो रेल चालक लापरवाहीपूर्वक अश्लील.....
रसिया-रुसकी इरिना ग्लादकिख हालसालै जेल परेकी छिन् । सौन्दर्य प्रतियोगितामा पनि भाग लिने गरेकी पूर्वसुन्दरी ३५ वर्षीया ग्लादकिख चेल्याबिन्स्क शहरकी बासिन्दा हुन् । उनले मस्कोनिवासी एक जना प्रहरीलाई आफ्नी १३ वर्षीया छोरीका उत्तेजक तस्बिर खिचाएर पठाएकी थिइन् । डाक्टरबाट छोरी कुमारी भएको प्रमाणपत्र.....
काठमाडौं, २९ वैशाख । भारतको मध्य प्रदेशमा एक ब्राह्मण परिवारका पुरुषले शिखा (टुप्पी) पाल्दा परिवार नै टुट्ने स्थितिमा पुगेको छ । उक्त व्यक्तिकी पत्नीले फ्यामिली कोर्टमा डिभोर्सका लागि निवेदन दिएकी छन् । टुप्पी पालेका कारण पति गँवार देखिएको आरोप पत्नीको छ । टुप्पीवाल पतिका कारण माइतीमा आफ्नो बेइज्जती.....